sannysinghs replied to ကိုအောင်'s discussion DNS ပတ်လမ်းဆိုသည်မှာ"ကျွန်တော် က အဲဒီ DNS အကြောင်းကို သေးစိတ် သိချင်တယ် အကို ဘယ်မှာ လေ.လာ၇မလဲ ...မြန်မာလို သိချင်တာ"Feb 9NayLinAung commented on sannysinghs's blog post ကျွန်တော် Codeigniter ကိုသုံးပြီးတော. လက်တွေ.အသုံးချတဲ. application လေးတစ်ခုေ၇းချင်လို.ပါ"here it is..
http://net.tutsplus.com/tutorials/php/codeigniter-from-scratch-day-1/"Jan 16sannysinghs postedablog postကျွန်တော် Codeigniter ကိုသုံးပြီးတော. လက်တွေ.အသုံးချတဲ. application လေးတစ်ခုေ၇းချင်လို.ပါကျွန်တော် မှာကျွန်တော်.နဲ ၀ါသနာတုသူငယ်ချင်းတွေ သိပ်မ၇ှိပါဘူး။ဒါကြောင်. ဒီforum လေးမှာ ကျွန်တော် request တောင်းSee MoreJan 8 1